January 22, 2021 - Achawlaymyar
သင်ရွေးချယ်မယ့်ကတ်က သင့်အနာဂတ်ကို အရိပ်အမြွက်ဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်…
January 22, 2021 by Achawlaymyar
1. သင်က ပထမဆုံး ကတ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် သိပ်မကြာခင် ဘ၀ထဲမှာ အလားလာကောင်းတဲ့ သက်ရောက်မှုတွေကို တွေ့ကြုံရဖို့ ရှိနေတယ်။ ဒီအပြင် ပတ်ဝန်ကျင်းကနေ ယုံကြည်မှုခွန်အားတွေ ပြည့်ဝလာဖို့ရှိတယ်။ အရာအားလုံးကို သင့်ရဲ့ ပလန်အအတိုင်းပဲ လုပ်ဆောင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။ တခြား တစ်ဖက်မှာတော့ အချိန်အကြာကြီး စီစဉ်လာခဲ့တဲ့ အရာကို နောက်ဆုံးမှာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေလည်း အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ သင့်အတွက် လုပ်ဖို့လိုအပ်တာကတော့ ခေါင်းမော့လျက် ဘာမဟုတ်တာလေးတွေ ဘ၀မှ အာရုံပျက်မခံဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ 2. နံပါတ် ၂ ကတ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ရင်တော့ ရှေ့မှာ သင့်အနေနဲ့ နည်းနည်းလေး ရုန်းကန်ရဖို့ရှိနေတယ်၊ ဘ၀မှာ သင့်အတွက် အထောက်အကူရဖို့ တစ်စုံတစ်ယောက်အပေါ် မှီတည်နေခြင်းမရှိဖို့နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ လမ်းစဉ်အတိုင်းပဲ အရာအားလုံးကို လုပ်ဆောင်ပါ။ ဒီလိုနေရင်းနဲ့မှ သင့်ကို နောက်ကွယ်ကနေ … Read more
သူသတိရင် ဖုန်းဆက်လာမှာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ မျှော်ဖြစ်ပါသေးတယ်…
ညတွေရောက်လာတဲ့အခါ ပထမဆုံးမျှော်ဖြစ်တာက သူဖုန်းများခေါ်လာမလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ညတွေမအိပ်ပဲ မျှော်ဖြစ်တယ်လေ .. သူ Good Night ပြောပြီးအိပ်တဲ့ ညတွေမှာမှ အိပ်မက်လှလှမက်တယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ့်အစွဲကလဲ ဖျောက်ရခက်နေတော့ ညတွေတိုင်း မျှော်ဖြစ်တယ် … သူဖုန်းခေါ်လာရင် အသံမကြားမှာစိုးလို့ အမြဲSilent လုပ်ထားတဲ့ဖုန်းလေးတောင် အသံချဲ့ထားသေးတယ် ဘယ်လောက်တောင်ရူးလိုက်သလဲ သူခေါ်မလာရင် ကိုယ်ခေါ်လိုက်ပေါ့ တဲ့ ကျွန်မ မာနတွေထားပြီး မခေါ်ဖြစ်တာ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ကိုယ်ကမျှော်နေပေမယ့် သူက မျှော်မနေတဲ့အခါ ကိုယ်ခေါ်တဲ့ဖုန်းဟာသူ့အတွက် အနှောင့်အယှက်တွေဖြစ်ရင်း ပြဿနာတွေတက်မှာစိုးလို့သာ ကိုယ်ရဲ့ အလွတ်ရနေတဲ့နံပါတ်လေးကို မနှိပ်ဖြစ်အောင် ထိန်းထားရုံပါ … ဒီည ပြဿနာတွေတက်ပြီး တကယ်ဝေးသွားတော့မှာလားဆိုပြီး မတွေးချင်တော့ရုံပါ … သူသတိရင် ဖုန်းဆက်လာမှာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ မျှော်ဖြစ်ပါသေးတယ် တစ်ရက်လုံး အလုပ်တွေမအားခဲ့ဘူးဆိုရင်တောင် ဒီအချိန်တော့ သူအားလောက်ပါပြီဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ကျွန်မ မျှော်ဖြစ်ပါသေးတယ် … Read more
ဒီနိမိတ်တွေသာတွေ့ရင် ထီဆိုင်ဘယ်မှာရှိလဲ ချက်ချင်း ရှာပြီးတော့သာထိုးပေတော့ ချက်ချင်းနော်
ကျိန်းသေနီးပါး ထီပေါက်စေသောနိမိတ်က ဒီလိုပါခင်ဗျာ … လမ်းသွားရင်းလာရင်း အမှတ်တမဲ့ ကြက်နှစ်ကောင်ခွပ်နေတာတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ နောက်လှည့် မကြည့်နဲ့တော့၊ ထီဆိုင်ဘယ်မှာရှိလဲ …၊ ချက်ချင်း ရှာပြီးတော့သာထိုးပေတော့ …၊ချက်ချင်းနော် …။ လူတိုင်းလူတိုင်း ဒီနိမိတ်တွေ့ရင် ထီပေါက် ကိန်း ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး ရှိနေပါတယ်။ ထီဆုကြီး ဆုသေးကတော့ အတိတ်ဘဝက ပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်ကံ ပါရမီအဟုန်နည်းခြင်းများခြင်းနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းကို အဘမင်းသိင်္ခ ရွှေဗဟိုဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေစဉ် အနီးအနားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် တို့ သန္ဓေတပည့်များကို ပြောပြပေးခဲ့တာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ အနားမှာရှိတဲ့ နေလင်းဆန်း ဆိုတဲ့သန္ဓေရဲဘော်လေးတစ်ယောက်ဟာ အဘအ တွက် ဆန်ပြုတ်ဆင်းဝယ်ရင်း ကြက်ခွပ်တာကိုတွေ့ လို့ ချက်ချင်းပြေးပြီး ထီဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ထီထိုးခဲ့ရာ ကျပ် ၁၀ သိန်း ဆုပေါက်ခဲဖူးတာကို မျက်မြင်ကိုယ် တွေ့ တွေ့ရှိခဲ့ရပါကြောင်း … Read more
ရည်းစားရတဲ့အခါလက်တွဲမြဲစေဖို့ Single ဘဝမှထဲကာ ကြိုပြင်ထားသင့်တဲ့ အရာ (၃) ခု
သင်သဘောကျတဲ့ ပုံစံ၊ သင့်ကို ပျော်ရွှင်အောင် ထားမယ့် လူတစ်ယောက်နဲ့ မဆုံတွေ့နိုင်ဘူးဆိုပြီး စိုးရိမ်နေပြီလား။ ဒီအချိန်ထိ Perfect Partner နဲ့ လုံးဝမတွေ့သေးဘူးလား။ ရည်းစားထားတဲ့အချိန်မှာ ခဏတဖြုတ်မဟုတ်ဘဲ အချိန်အကြာကြီးတွဲနိုင်ဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ခဏလေးနဲ့ ပြတ်သွားတာက ကိုယ့်အတွက်မကောင်းပါဘူး။ လူတွေရဲ့ တလွဲထင်မြင်ခြင်းကို ခံရနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်သဘောကျတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံတွေ့တဲ့အချိန် လက်တွဲမြဲနေစေဖို့ Single ဘဝတည်းက လုပ်သင့်တဲ့အရာ (၃) ခုကတော့- ၁။ သင်လိုချင်တဲ့ပုံစံကို ကြိုတွေးထားပါ သင့်ဘဝမှာ သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေကို စဉ်းစားသလိုပဲ သင့်ရည်းစားမှာရှိသင့်တဲ့အရာတွေကိုလည်း ကြိုစဉ်းစားထားသင့်ပါတယ်။ ရိုးသားတာကို တန်ဖိုးထားတာလား။ ရုပ်ချောတာကို အဓိကထားလား။ သင့်လိုအပ်ချက်တွေကို ကြိုတွေးထားပါ။ ၂။ သင့်အားနည်းချက်ကို တန်ဖိုးထားပါ သင့်ပျော့ကွက် အားနည်းချက်တွေကို အခြားလူတွေဆီမှာ ရင်ဖွင့်နိုင်လား။ ကိုယ့်ရဲ့အရှိအတိုင်းပဲ ကိုယ့်ချစ်သူရှေ့ နေနိုင်မလား။ … Read more
သင်ဟာ…1ရက်နေ့ မွေးသူ ဖြစ်ရင်.. သင့် ချစ်သူ ဟာ တတ်တတ်ကြွကြွရှိမယ် ဖြတ်ထိုးဥာဏ် အလွန်ကောင်းပြီး လူတဖက်သားကို ကူညီတတ်မဲ့သူတျောက်ဖြစ်တယ်။သင့်အတွက်ဆို လိုချင်တာဖြည့်စည်းပေးမယ့် သူဌေးကြီးတျောက်လိုပါပဲ…2ရက်နေ့ မွေးသူ ဖြစ်ရင်… သင့် ချစ်သူ ဟာ ကြင်နာယုယတတ်တယ်။ သင့်ကိုအမြဲဂရုစိုက်တတ်ပြီး အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင် ပါရမီပါသူတျောက်ဖြစ်တယ်။သင့်အတွက်ဆိုမမေ့နိုင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဒွေ ဖန်တီးပေးမယ့်သူတျောက်ပါပဲ။3ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင် သင့်ချစ်သူဟာ စိတ်လိုက်မာန်ပါလုပ်တတ်တယ်။ ဆရာကြီး လုပ်ရမှာကျေနပ်ပြီးအမှားလုပ်မိရင်လည်း တောင်းပန်ဖို့ဝန်မလေးသူတျောက်ဖြစ်တယ်။သင့်အတွက်ဆို အခက်အခဲတွေကို တူတူဖြတ်ကျော်မယ့် လက်တွဲဖော်ကောင်း တျောက်ပါပဲ.။ 4ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်… သင့် ချစ်သူ ဟာ စိတ်နေသဘောထားကြီ်းတယ်။ လက်တွေ့အကောင်ထည်ဖော်လုပ်ဆောင်ရမှကျေနပ်သူတျောက်ဖြစ်တ်တယ်။ သင့်အပေါ် နည်းနည်းလေး အနိုင်ယူရမှ ကျေနပ်နေသူတျောက်ဖြစ်တယ်။ 5ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်… သင့်ချစ်သူဟာ ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး လူချစ်လူခင်များတတ်သူတျောက်ဖြစ်တယ်။သင့်ကို အမြဲအားပေး ကူညီချင်တဲ့ သူ တျောက်လည်းဖြစ်တယ်။ 6ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်… … Read more
သင့်ရဲ့လက်သန်းလေးမှပြောပြသော သင့်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား ဘာတွေလဲ
သင့်ရဲ့လက်သန်းလေးမှပြောပြသောသင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကဘာတွေလဲဝင်ဖတ်ကြည့်လိုက်လူတစ်ယောက်ရဲ့လက်ဖဝါးက သူ့ဘဝအကြောင်းတွေနဲ့များစွာပတ်သက်နေလေ့ရှိတယ်လို့ခေတ်အဆက်ဆက်ပညာရှင်တွေကယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တိုိ့ဆီမှာလည်းလက္ခဏာပညာရပ်ကထင်ရှားတဲ့ပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့သင့်လက်ကဘယ်အမျိုးအစားထဲမှာပါမလဲဆိုတာကြည့်ပြီးရင်အဖြေတွေကိုတစ်ပုံချင်းစီမှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ မြိုသိပ်လွန်းသူ(A)ပုံနဲ့တူတယ်ဆိုရင်တော့သင်ဟာသင့်ရင်ထဲကခံစားချက်တွေကိုလူတွေမသိအောင်ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်ထားချင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။လူတွေကသင့်ကို အားငယ်တတ်သူတစ်ယောက်လို့ထင်မှာကို စိုးရိမ်နေတယ်။ ပွင့်လင်းသူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။လူတွေအပေါ်မှာသံသယများတတ်ပြီးလွယ်လွယ်နဲ့မယုံတတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အတန်သင့် ရင်းနှီးသွားရင်လည်းအလွန်ယုံကြည်သွားပြီးရင်တွင်းခံစားချက်တွေကိုဖွင့်ဟတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်စိတ်ထားကောင်းပြီးအခြားသူတွေကိုအကူအညီပေးတတ်သူဖြစ်တယ်။ တာဝန်တစ်ခုခုပေးအပ်ထားတဲ့အခါသင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တောင်မှပြီးမြောက်အောင်လုပ်ကိုင်ပေးတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အချစ်ကြီးသူ(B)ပုံနဲ့တူတယ်ဆိုိရင်တော့သင်ဟာအလွန်အကောင်းကြိုက်တတ်သူဖြစ်တယ်။အလွန်ရှက်တတ်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ လူတစ်ယောက်ဘယ်တော့မှကိုယ့်ဘက်ကအရင်စမိတ်မဆက်ဘူးဆိုတဲ့လူစားမျိုးဖြစ်တယ်။အချစ်ရေးမှာတော့အချစ်ကြီးတတ်သူတွေဖြစ်ကြတယ်။လူတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်မိပြီဆိုရင်ချစ်သူအနားကမခွာတမ်းကပ်နေတတ်သူတွေဖြစ်တယ်။အတွင်းစိတ်ကတော့အလွန်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်လွယ်တတ်တယ်။ နာကျင်ခံစားရမှာကိုကြောက်တတ်တယ်။အလုပ်တစ်ခုကိုစလုပ်မိရင်လည်းဆုံးခန်းတိုင်အောင်လုပ်ကိုင်လေ့ရှိသူဖြစ်တယ်။အပြင်မှာတော့ဘယ်သူ့ကိုမှ မလိုအပ်ဘူးပြောနေပေမယ့်စိတ်ထဲမှာတော့အပေါင်းအဖော်လိုအပ်နေသူဖြစ်တယ်။ ခွင့်လွှတ်လွယ်သူ(C)ပုံနဲ့တူတယ်ဆိုရင်တော့သင်ဟာအလွန်ခွင့်လွှတ်လွယ်တတ်သူဖြစ်တယ်။ စိတ်နာစရာကိစ္စတွေကိုကြာကြာဖက်တွယ်မထားတတ်ဘဲမေ့ပျောက်လွယ်တယ်။တစ်ခုခုအခက်အခဲရှိရင်ဘယ်သူ့ကိုမှမတိုင်ပင်ဘဲတစ်ယောက်ထဲကျိတ်ဖြေရှင်းတတ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်(သို့)အလုပ်(သို့)တစ်ခုခုအသစ်တွေနဲ့ ကြုံရလုပ်ရတိုင်း စိုးရိမ်လေ့ရှိတယ်။တခြားလူတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမြင်တွေကို တန်ဖိုးထားတတ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးမှု မြင့်မားတာကြောင့်တစ်ခါတစ်လေမှာအထက်စီးဆန်ဆန်ပြောဆိုမိလေ့ရှိတယ်။ပွင့်လင်းတဲ့စိတ်ထားရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကတခြားသူတွေအပေါ်စေတနာထားသလိုကိုယ့်ကိုလည်းပြန်ပြီးစေတနာထားကြဖို့မျှော်လင့်ပေမယ့်အမြဲတမ်းလွဲတတ်လေ့ရှိပါတယ်။မေတ္တာဖြင့် TKW Credit Unicode, သငျ့ရဲ့လကျသနျးလေးမှပွောပွသောသငျ့ရဲ့စိတျနစေိတျထားကဘာတှလေဲဝငျဖတျကွညျ့လိုကျလူတဈယောကျရဲ့လကျဖဝါးက သူ့ဘဝအကွောငျးတှနေဲ့မြားစှာပတျသကျနလေရှေိ့တယျလို့ခတျေအဆကျဆကျပညာရှငျတှကေယုံကွညျခဲ့ကွပါတယျ။ကြှနျတျောတို့ဆီမှာလညျးလက်ခဏာပညာရပျကထငျရှားတဲ့ပညာတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒီတော့သငျ့လကျကဘယျအမြိုးအစားထဲမှာပါမလဲဆိုတာကွညျ့ပွီးရငျအဖွတှေကေိုတဈပုံခငျြးစီမှာဖတျကွညျ့လျိုကျပါ မွိုသိပျလှနျးသူ(A)ပုံနဲ့တူတယျဆိုရငျတော့သငျဟာသငျ့ရငျထဲကခံစားခကျြတှကေိုလူတှမေသိအောငျဟနျဆောငျဖုံးကှယျထားခငျြသူတဈယောကျဖွဈတယျ။လူတှကေသငျ့ကို အားငယျတတျသူတဈယောကျလို့ထငျမှာကို စိုးရိမျနတေယျ။ ပှငျ့လငျးသူတဈယောကျမဟုတျဘူး။လူတှအေပျေါမှာသံသယမြားတတျပွီးလှယျလှယျနဲ့မယုံတတျပါဘူး။ဒါပမေဲ့အတနျသငျ့ ရငျးနှီးသှားရငျလညျးအလှနျယုံကွညျသှားပွီးရငျတှငျးခံစားခကျြတှကေိုဖှငျ့ဟတတျသူတဈယောကျဖွဈတယျစိတျထားကောငျးပွီးအခွားသူတှကေိုအကူအညီပေးတတျသူဖွဈတယျ။ တာဝနျတဈခုခုပေးအပျထားတဲ့အခါသငျမကွိုကျဘူးဆိုရငျတောငျမှပွီးမွောကျအောငျလုပျကိုငျပေးတတျသူတဈယောကျဖွဈတယျအခဈြကွီးသူ(B)ပုံနဲ့တူတယျဆိုရငျတော့သငျဟာအလှနျအကောငျးကွိုကျတတျသူဖွဈတယျ။အလှနျရှကျတတျသူတဈယောကျလညျးဖွဈတယျ။ လူတဈယောကျဘယျတော့မှကိုယျ့ဘကျကအရငျစမိတျမဆကျဘူးဆိုတဲ့လူစားမြိုးဖွဈတယျ။အခဈြရေးမှာတော့အခဈြကွီးတတျသူတှဖွေဈကွတယျ။လူတဈယောကျနဲ့ ခဈြမိပွီဆိုရငျခဈြသူအနားကမခှာတမျးကပျနတေတျသူတှဖွေဈတယျ။အတှငျးစိတျကတော့အလှနျစိတျဆိုးစိတျကောကျလှယျတတျတယျ။ နာကငျြခံစားရမှာကိုကွောကျတတျတယျ။အလုပျတဈခုကိုစလုပျမိရငျလညျးဆုံးခနျးတိုငျအောငျလုပျကိုငျလရှေိ့သူဖွဈတယျ။အပွငျမှာတော့ဘယျသူ့ကိုမှ မလိုအပျဘူးပွောနပေမေယျ့စိတျထဲမှာတော့အပေါငျးအဖျောလိုအပျနသေူဖွဈတယျ။ ခှငျ့လှတျလှယျသူ(C)ပုံနဲ့တူတယျဆိုရငျတော့သငျဟာအလှနျခှငျ့လှတျလှယျတတျသူဖွဈတယျ။ စိတျနာစရာကိစ်စတှကေိုကွာကွာဖကျတှယျမထားတတျဘဲမပြေ့ောကျလှယျတယျ။တဈခုခုအခကျအခဲရှိရငျဘယျသူ့ကိုမှမတိုငျပငျဘဲတဈယောကျထဲကြိတျဖွရှေငျးတတျတယျပတျဝနျးကငျြ(သို့)အလုပျ(သို့)တဈခုခုအသဈတှနေဲ့ ကွုံရလုပျရတိုငျး စိုးရိမျလရှေိ့တယျ။တခွားလူတှရေဲ့ ကိုယျပိုငျအမွငျတှကေို တနျဖိုးထားတတျတယျ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုအထငျကွီးမှု မွငျ့မားတာကွောငျ့တဈခါတဈလမှောအထကျစီးဆနျဆနျပွောဆိုမိလရှေိ့တယျ။ပှငျ့လငျးတဲ့စိတျထားရှိသူတဈယောကျဖွဈတယျကိုယျကတခွားသူတှအေပျေါစတေနာထားသလိုကိုယျ့ကိုလညျးပွနျပွီးစတေနာထားကွဖို့မြှျောလငျ့ပမေယျ့အမွဲတမျးလှဲတတျလရှေိ့ပါတယျ။မတ်ေတာဖွငျ့ TKW Credit
၀က်ခြံထွက်ခြင်းဟာ သာမန်အရေပြားပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူတိုင်းလိုလိုဝက်ခြံပေါက်ဖူးကြပါတယ်။၀က်ခြံထွက်ခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းကတော့ အဆီဂလင်းတွေမှာဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၀က်ခြံထွက်တဲ့နေရာတွေမှာ ဖူးရောင်ခြင်း၊ပြည်တည်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေအနေမဆိုးရွားအောင်သေချာစနစ်တကျကုသဖို့တော့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝက်ခြံပျောက်ကင်းစေတဲ့ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးအသုံးဝင်မယ့် ဆေးနည်းလေးတွေကို Shwemomပရိသတ်ကြီးအတွက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ရေခဲ ရေခဲကအရေပြားမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အနီစက်လေးတွေနဲ့ဝက်ခြံကြောင့်ဖူးရောင်ခြင်းတို့ကိုလျော့နည်းသက်သာစေပါတယ်။၀က်ခြံထွက်တဲ့နေရာတ၀ိုက် သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။အရေပြားမွေးညှင်းပေါက်လေးတွေမှာပိတ်ဆို့နေတဲ့ဝက်ခြံဖြစ်စေတဲ့ဖုန်မှုန့်နဲ့အဆီတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ရေခဲတုံးကိုအ၀တ်သန့်သန့်နဲ့ထုပ်ပြီးဝက်ခြံထွက်တဲ့နေရာတ၀ိုက်ကိုကြပ်ထုပ်ထိုးသလို လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ၀က်ခြံတွေသက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ ရေနွေးငွေ့ ရေနွေးက၀က်ခြံကုတဲ့နေရာမှာသိသိသာသာအာနိသင်ရှိတဲ့အရာပါ။၀က်ခြံရှိတဲ့နေရာကို ရေနွေးငွေ့ခံပေးရမှာပါ။အဲဒီအခါ ရေနွေးကအရေပြားပေါ်က ချွေးပေါက်လေးတွေကိုပွင့်စေပြီး အောက်ဆီဂျင်ကိုလုံလုံလောက်လောက်ရှူရှိုက်ခွင့်ရမှာပါ။ချွေးပေါက်လေးတွေမှာဖုန်မှုန့်နဲ့အဆီတွေပိတ်နေရင်အရေပြားဖူးရောင်ပြီးဝက်ခြံထွက်စေပါတယ်။ရေနွေးငွေ့ကိုမိနစ်၂၀လောက်ခံပြီးသွားရင် ရေဆေးပါ။အသားအရေခြောက်သွေ့မှုကိုခံစားရရင်အဆီမပါတဲ့အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ်တစ်မျိုးမျိုးကိုလိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ သွားတိုက်ဆေး သွားတိုက်ဆေးကို မနက်အိပ်ရာထချိန် သွားလေးတွေစင်ကြယ်ဖြူစင်ဖို့အတွက်သုံးတာကိုပဲသိထားကြမှာပါ။ဒါပေမယ့် သွားတိုက်ဆေးဟာဝက်ခြံတွေကိုအမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းနိုင်ဖို့ကူညီနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဆားဝက်ခြံလို့သိထားတဲ့အမဲစက်လေးတွေကိုသိသိသာသာဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။တစ်ခုသတိထားရမှာကသွားတိုက်ဆေးကိုသုံးတဲ့အခါဂျယ်သွားတိုက်ဆေးမဖြစ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။အသုံးပြုနည်းကတော့သွားတိုက်ဆေးကိုညအိပ်ရာမ၀င်မီဝက်ခြံရှိတဲ့နေရာတွေမှာမထူမပါးသုတ်လိမ်းပေးရပါမယ်။နာရီဝက်လောက်ထားရင် ခြောက်သွားပြီးအချပ်လိုက်ခွာလို့ရမှာပါ။ပြီးရင်တော့ရေဆေးချပြီးအိပ်လိုက်ရင် မနက်အိပ်ယာထတဲ့အခါ ၀က်ခြံတွေသိသိသာသာလျော့နည်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ သဘောင်္သီး သဘောင်္သီးမှာဗီတာမင် အေနဲ့အင်ဇိုင်းဓာတ်တွေပါဝင်တာကြောင့်အသားအရေကိုချောမွတ်စေသလိုဝက်ခြံကြောင့်အရေပြားရောင်ရမ်းတာတွေလည်း လျော့နည်းစေပါတယ်။သဘောင်္သီးကိုပျားရည်အနည်းငယ်ရောပြီး ဖျော်ရည်လုပ်သောက်နိုင်သလိုအနှစ်ပြုလုပ်ပြီးဝက်ခြံရှိရာနေရာတ၀ိုက်ကိုအုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်လိမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။အသာအယာနှိပ်နယ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ၀က်ခြံတွေသိသိသာသာလျော့နည်းသွားမှာပါ။ သခွားသီး သခွားသီးမှာဗီတာမင် အေ၊စီ၊အီးနဲ့ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသားအရေကိုအမှန်တကယ် ကောင်းမွန်စေပါတယ်။သခွားသီးကိုသတ္တုရည်ရအောင်လုပ်ပြီး ရေနဲ့ဖျော်သောက်နိုင်သလိုအဲဒီသတ္တုရည်နဲ့ဝက်ခြံရှိတဲ့နေရာတွေကို ဆေးကြောပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင် သခွားသီးကိုပါးပါးလှီးပြီး ၀က်ခြံရှိရာနေရာတ၀ိုက်မှာ facial maskအဖြစ်လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ChoChoThan(Shwemom) Unicode, ဝကျခွံထှကျခွငျးဟာ သာမနျအရပွေားပွဿနာတဈခုဖွဈပွီး လူတိုငျးလိုလိုဝကျခွံပေါကျဖူးကွပါတယျ။ဝကျခွံထှကျခွငျးရဲ့ အဓိက အကွောငျးအရငျးကတော့ အဆီဂလငျးတှမှောဘကျတီးရီးယားပိုးဝငျရောကျခွငျးကွောငျ့ဖွဈပွီး ဝကျခွံထှကျတဲ့နရောတှမှော … Read more
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပုံတင်တဲ့ ကောင်မလေးများဖတ်ရန် ကျော်မသွားနဲ့နော် ဗဟုသုတရအောင်လို့ပါ…/
Online ​ပေါ်မှာ ပုံတင်​​ကောင်း​သော အစ်​မ ညီမ​လေးများ မ​ကျော်​ပဲဖတ်​​ပေးကြပါရန်​ ဤ စာ​စောင်​ကို ၂၀၁၃ မှာ ​ရေးသားခဲ့တာပါ ယခု မဖတ်​ရ​သေးတဲ့ သူ​တွေအတွက်​ ပြန်​တင်​​ပေးပါရ​စေ (စာရေးသူအသုံးအနှုံး ရိုင်းကောင်း ရိုင်းနိုင်ပါတယ်…ဒါပေမယ့် ပွင့်လင်းစွာပြောတတ်တဲ့အမူအကျင့်ကြောင့် စာဖတ်သူများ နားလည်ပေးစေလိုပါတယ်…ဒီစာကိုဆုံးအောင်ဖတ်ကြည့်ပါ…ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာအမှန်တရားတစ်ခု သိရှိလက်ခံလိုက်ကြရမယ်ဆိုရင် ရေးရကြိုးနပ်ပါပြီ) Facebook ပေါ်မှာ မိန်းမသားတစ်ချို့မှားယွင်းမှုတွေ နဲ့ သာယာနေကြတာတွေ့ရတယ်… ပုရိသ ကျားသဘာဝ ကို နားမလည်… ထင်ပေါ်မှုအတွက် မပေါ် ပေါ်အောင်ဖော်လို့ … အဝတ်ဗလာလေးတွေနဲ့ ဆယ်လီရူး ရူးနေကြပြန်တယ် …. သမီးလှလာဟင့်… ဆိုတဲ့ နောက်မှာ သားကောင်ရှာတဲ့ ကျားတချို့ ပေးတဲ့ likeသိန်းချီရလို့တဏှာရူးတွေရဲ့ အလှဘုရင်မ အဖြစ် မော့ကြွားနေကြပြန်တယ် … Read more
အချစ်ရေးမှာ လူရွေးမှားနေပြီဆိုတာ သိသာစေတဲ့ လက္ခဏာများ…
သင် ဘယ်အချိန်မှာမွေးဖွားလည်း ဆိုတာ သိတယ်ဆို မှန်/ မမှန်ဖတ်ကြည့်သွား…
ည သန်းကောင်ကျော် တွင်မွေးသူများ ညမွန်း တည့်(၁၂)နာရီကျော် ၍ တစ်နာရီ၊ နှစ်နာရီ စသည့် အချိန် ပတ်ဝန်းကျင် တွင်မွေးဖွား သူများဖြစ်လျှင် ဘဝတစ် လျှောက်လုံး တွင် ဆွေမျိုး ညီအစ် ကိုမောင်နှမ များနှင့် နီးစပ် ဆက်သွယ်ရသော အကျိုး ကို ပေးကို ရလိမ့်မည်။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ ဆွေမျိုး သားချင်းများသည် ဇာတာရှင်၏ ဘဝတွင် ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးပြုကြ ကုန်သော အဓိက ဇတ်ဆောင် များဖြစ်ကြ လိမ့်မည်။ မိဘမောင် ဘွားများကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး အချစ်ရေးတို့ တွင် အနှောင့် အယှက် အတား အဆီးတွေ့ရ သူများ ၊ မိဘမောင်ဘွားများ ကိုငဲ့ညှာ၍ အလွယ် တကူ အိမ်ထောင် မပြုနိုင်ဘဲ … Read more